पाँचखालमा अटो दुर्घटनामा परि छ जना घाईते – Radio Roshi
पाँचखालमा अटो दुर्घटनामा परि छ जना घाईते
अरनिकको राजमार्ग तीनपिप्लेमा अटो दुर्घटना हुँदा छ जना घाईते भएका छन । पाँचखाल नगरपालिका वडा न ४ मा तीनपिप्लेबाट पाँचखाल तर्फ जाँदै गरेको ना.अ.प.का. १३६३ नम्बरको अटो अनियन्त्रित भई सडकबाट पल्टिदा छ जना घाईते भएको प्रहरी कार्यालल काभे्रले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभे्रका डीएसपी दीपक गिरीका अनुसार पाँचखाल न.पा.७ बस्ने बर्ष २० का साजन न्यौपाने, वडा न ६ बस्ने बर्ष १५ को सबिन दनुवारको अवस्था गम्भीर रहेको छ । त्यस्तै वडा न ४ बस्ने बर्ष २६ को राजु दनुवार, वडा न ६ बस्ने बर्ष २२ को शुनिल दनुवार र धुलिखेल न.पा. ११ बस्ने बर्ष २१ को सुरेन्द्र श्रेष्ठ को अबस्था मध्यम रहेको छ भने पाँचखाल वडा न २ बस्ने बर्ष १९ को ईसाक थापा मगरको अवस्था सामान्य समान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाईतेहरुको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।